Rita, Writing for My Sake!: ရွှေအဆင်း နေပွင့်တဲ့ အရပ်ဒေသ (၁၁)
Posted by Rita at 3/28/2010 09:35:00 PM
အတိတ်ဆိုတာ ရထားတစ်စင်းလိုပဲ တဲ့။ ဖြတ်ကျော်လာခဲ့ပြီးတဲ့ နေရာတွေကို ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်လှည့်လို့ မရဘူး။(မှန်၏ ။ ထို့ကြောင့် အဘယ်သို့သော အကြောင်းကိုမှ တမ်းတ နောင်တရနေစရာမလိုချေ)
ဒါဆိုလည်း တခြားယောက်ျားတွေ အတွက်တော့ ကိုယ် ဆိုးစရာ မလိုပါဘူး လို့။
( အဲဒီလိုပြောတတ်တာလေးကို ကြိုက်တယ် )
တစ်ခန်းရပ် 'ငါးရံ့အူ' ထဲက စကားပြောလေးတွေကို ကြိုက်တယ်။း)
ဇွန်လည်း ခေါင်းမှာ ဆံပင်ဖြူတွေ့ရင် နှုတ်မိတယ်။ ပွားမှန်းသိပေမယ့် နှုတ်လိုက်ရမှ ကျေနပ်သလိုလို။ နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့မနှုတ်ဘဲ ကပ်ကြေးနဲ့ပဲ ဖြတ်တော့မယ်။ :D
တီကိုယ်တိုင်တော့ ငါးရံ့အူ မစားဘူး
ဒီကလဲ စာအုပ်ဖတ်လိုက် ဖုန်းနဲ့လှမ်းမေးလိုက်ရုံနဲ့တင် တတ်ပါတယ်
အစက ဖတ်ရင်းနဲ့ အချေကြီးနဲ့ ချက်တာ စားမယ် ဂျီးမများဘူးပြောနေတာ ဒေါ်ရီတာလို့ထင်တာ
သူက များ အောက်ကျ နောက် ကျ ချက်ကျွေးမယ့်အရေး အဒေါ်တွေဆီက သင်ထားပါ့မယ်နဲ့
ကျမ လို ချက်ကျွေးမယ် ယောက်ျား ယူထား
မဟုတ်ရင်လဲ ယောက်ျား ကို အနိုင်ယူနည်း တရာ့ တပါး အန်တီချမ်းဆီ လာသင်ထား ဟိဟိ
လင်နေစ ကြောင် ကော ကြွက်ကော ခွေးကော အကုန်သေထားမှနော်
မဟုတ်ရင် အောက် ချ ပြီး အနင်းခံရမှာ
အယ်ငါတော့ ဖျာ (ယပင့်ပါသည် သေချာဖတ်) ဖြစ်နေပါ့လား မပြောနဲ့
စားပြီး အအေးသောက်နေတုန်း "နောက် ၂ ရက် ၃ ရက်နေရင် ဒီလို ဟီးဟီးဟားဟား နေရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟိုရောက်ပြီး မျက်နှာသေလေးနဲ့ ဖြစ်နေပြီ" လို့ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ကိုယ်ပြောမိတယ်။
Make fully enjoy.
This guy in your photo is from IM 2?
Yes, he's Dr Aung Tin Htut.
yes I'm also from IM 2. We were same batch. Can you, please, relay my hello to him?
I will fwd your mail to him.
sorry for late bcoz of system err.